Sida loo joojiyo dhammaan emails-ku-qorista-cusboonaysiinta App Store-ka | BehMaster
Sida loo joojiyo dhammaan emaylladaas is-diiwaangelinta-cusboonaysiinta ee App Store" />
Haddii aad leedahay rukunsiyada App Store, waxaad baran doontaa iimaylada aad hesho mar kasta oo la cusbooneysiiyo. Oo haddii aad ku biirto in ka badan dhowr qorshe bille ah, markaas waxaa laga yaabaa in aad xitaa ka xanaaqsan iyaga by. Haddii dulqaadka aad u leedahay wax noocan oo kale ah uu si gaar ah u hooseeyo, waxaan kuu haynaa war wanaagsan: Hadda waxaad ka bixi kartaa iimaylada cusbooneysiinta ee App Store-ka ee ay soo dirto.
Sida looga baxo App Store is-diiwaangelinta-cusboonaysiinta iimaylada
Haddii aad rabto inaad joojiso helista iimaylada cusboonaysiinta-cusboonaysiinta ee Apple's App Store, kaliya fur Settings app ku jira iPhone-kaaga ama iPad-kaaga. Kadibna taabo banner oo magacaagu ku dul yaal, midigta ugu sarreeya. Kadib taabo Macmiil.
Ka bax iimayllada dib-u-cusboonaynta ee is-diiwaangelinta.
Si aad uga baxdo iimayladan, kaliya beddel Hel rasiidhada cusboonaysiinta dami Waa kaas. waad dhammaatay
Maxaa laga yaabaa inaadan rabin inaad tirtirto
Ilaa aad haysatid malaayiin is-diiwaangelin ah mooyaane, way adag tahay in la qiyaaso in kuwan (inta badan) iimaylladan billaha ah ay dhab ahaantii heli karaan xanaaq. Laakin xitaa haddii ay kugu kaxeeyaan cadho-ceyaamo cas mar kasta oo aad mid aragto, markaas waxaa laga yaabaa inaad weli rabto inaad sii socoto.
Haddii aad iska qori karto isdiiwaangelinta abka wakhtiga cashuurta, hubaal waa inaad xafiddaa iimayladan. Waxay ku jiraan qaansheegta xilliga is-diiwaangelinta, oo sidaas darteed waxaa loo diri karaa xisaabiyahaaga, ama ku alla kii wax caynkaas ah kuu sameeya.
Fikir ka wanaagsan in si fudud loo damiyo? Samee xeerka boostada si aad si toos ah ugu fayl-garayso iimaylada is-diiwaangelinta galka Tani waxay ka ilaalinaysaa inay kiciyaan cadhadaada yar, laakiin sidoo kale waxay la macno tahay inay si badbaado leh loo xareeyay, halkii ay weligood ku lumin lahaayeen sanduuqaaga aan la maamulin.
Waxaan haynaa cashar dhan oo ku saabsan abuurista xeerarka boostada, labadaba Mac iyo sidoo kale si toos ah server-yada adeegga iimaylka. Waxaa hubaal ah inay mudan tahay in la eego.
Google si uu u muujiyo xayaysiisyada wax iibsiga ee Gmail